Meo | Kyaw Chan Thar (KCT) Co., Ltd.
Technology – 100% Synthetic + Ester
Standards – API SL
Approvals – JASO MA2
Suitable – For all 4-stoke motorbike engines, Road and off-road bikes, Trails, Cross/Euduro bikes, Quads.
နောက်ဆုံးပေါ် မျိုးဆက်သစ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင် မော်တော်ဆိုင်ယ်များ အထိပါ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Sport Bike, Street Road Bike, trails, off Road bikes, enduro အစရှိသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် (4 stroke) လေးချက်ခုတ်အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားသော မော်တော် ဆိုင်ကယ်များ အသုံးပြုနိုင်ပြီး WORLD BIKERS များမှ တခဲနက် ထောက်ခံအားပေးမှု ရရှိထာသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်သုံး အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပါသည်။
Suitable – For all 4-stoke motorbike engines,Road and off-road bikes, Trails, 4-stoke Cross/Endure bikes,Quads.
နောက်ဆုံးပေါ် မျိုးဆက်သစ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Sport Bike, Street Road Bike, trails, off Road bikes, enduro အစရှိသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် (4 stroke) လေးချက်ခုတ်အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါသည် နည်းပညာမြင့်မားပြီး မြင့်မားသော အပူဒဏ် heat တက်ခြင်းကို ကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အင်ဂျင်အတွင်းဂျေး ကပ်တွယ်မှု မရှိဘဲ လမ်းကြမ်း၊ လမ်းချောသုံး မည်သည့်ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားတွင်မဆို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Standards – API SJ
Suitable – For all 4-stoke motorcycle engine, street, road bikes, Trails, off-road bikes.
Hydrocracked နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြင့်မားသော အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ခြင်းနှင့် အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်း ပွတ်တိုက်စားမှု အထူးလျော့နည်းသည့်အပြင် ကလပ်ချော်မှု၊ ကလပ်စာထွက်ရှိမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် MA2 ထောက်ခံချက်ကို ရရှိထားပါသည်။ ဂီယာအကူးအပြောင်းကို များစွာလွယ်ကူ ချောမွေ့စေပါသည်။
3000 Plus 4T 15W50
Motul Moto 4T 10W50
Standards – API SH
JASO MA2 ထောက်ခံရရှိထားသဖြင့် အာရှဈေးကွက်ရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် အသုံးပြုရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကလပ်ချ် ချော်ခြင်းကို တာဆီးပေးခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွက် တိုက်စားမှုနှင့် ပွန်းစားပျက်ဆီးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်သက်တမ်းကြာရှည်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
Motul Moto 4T 20W50
API SH ထောက်ခံရရှိထားသဖြင့် အာရှဈေးကွက်ရှိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် အသုံးပြုရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကလပ်ချ် ချော်ခြင်းကို တာဆီးပေးခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွက် တိုက်စားမှုနှင့် ပွန်းစားပျက်ဆီးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အင်ဂျင်သက်တမ်းကြာရှည်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။